Nkọwa mbu nke Realme 3i pụtara | Gam akporosis
Oppo enweela ihe ịga nke ọma n'ịzụlite Realme, ụlọ ọrụ nweere onwe ya ugbu a kwụsịrị ịnọ n'okpuru nku Oppo ọnwa ole na ole gara aga. Ihe akaebe nke a bụ nọmba ahịa ndị ọnụahịa ndị na-ewu ewu nwetara site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a, nke na nso nso a na China y na-agbasawanye na Europe dum.
Ebe ọ bụ na ọ malitere 3 bu eziokwu, ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị ahọpụtara ịhọrọ nke a abụghị akara ochie. Na Ezigbo 3 Pro ọ bịara mgbe e mesịrị, ma ọ na-enweta ezigbo nnabata na ahịa. Ugbu a ọ dị ka ngwaọrụ ọhụrụ nke otu akara a ga-abịa, nke a ga-akpọ Ezigbo 3i, na Geekbench bụ akara ngosi nke nyere nkọwa mbụ ya.
Geekbench ndepụta nke 'Realme RMX1827' ekpughela nke ahụ A na akwado ya MediaTek MT6771VW octa-core processor. Chipset a abughi ihe ozo Helio P60, processor na-akwadebe cores asatọ, nke isi anọ bụ Cortex-A73 na 2.0 GHz na ndị ọzọ bụ Cortex-A53 n'otu oge elekere; a na-eji quartet mbụ arụ ọrụ na usoro kachasị achọ, ebe ndị ọzọ na-elekwasị anya na arụmọrụ ike. Igwe okwu mkpanaka a na-eji igwe oyuyo Mali-G72.
Geekbench ndepụta nke Realme 3i
SoC na-enyere 4 GB nke Ram aka. N'aka nke ya, a na-ejikwa sistemụ arụmọrụ na ekwentị ahụ A gam akporo 9 achịcha na, dabere na nyocha nke emere n’elu ikpo okwu, n’otu isi ya nwetara ihe 1,420, ebe ihe 5,070 bu ihe o debara na otutu isi.
Ebe ọ bụ na Realme 3i a na-atụ anya ya ogologo oge pụtara na Geekbench, ntọhapụ gị nwere ike ịdị n'akụkụ akuku, ma nke a bụ ihe anyị ga-egosi, yana aha ngwaọrụ. E kwesịrị ikpughe nkọwa ndị ọzọ, dị ka ọnụahịa ya. Anyị ga-eche mara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nkọwa izizi nke Realme 3i pụtara ekele Geekbench
New Qualcomm Snapdragon 215: ntinye ntinye nwere nhọrọ ohuru ịhọrọ site na